Education, Seenaa May 1, 2016May 1, 2016bEEKAN gULUMA
104SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Eegaa! “Ilmoon leencaa leencuma, dameen odaa oduma malee dambii wahii taatiiree?” Gonkuma odaan dambii hin tahu. Kan jecha kana mirkaneessite dhalli leencaa, dameen latiinsa gootootaa, Sabboontuun onnee qeerreensaa, qaroo sammuun qaroominaan badhaate, jaalattuufi quuqamtuun fooniif dhiiga isii Aadde Leensaa Guddinaa, abbaa isii goota kutataa du’a hin sodaanne, Guddinaa Tumsaafi Harmee isii adde Tsehay Tolosaa gidduu argamte. Maatii isii qofaaf osoo hin tahin sammu qabeettii, amala toleettii intalaa taatee ergama dhiiga Oromoo keessa jiru baadhattee saba isiitiif gara ardii tanaa dhufte. Dhuftees maatii sabboontootaafi onnattoota keessatti guddina jireenya isii jalqabde. Mul’anni abbaa isii keessa ture, kan eenyulleen amantii kamuu hordofuus saba isaatiif waan gaarii hojjachuu qaba jedhu san Leensaa keessattiis akka biqiltuu odaa margee guddina isii waliin akeekniis guddachaa, mul’anniis dagaagaa deemuu jalqabe.
Leensaa Guddinaatiis bara 1991 akkuma Dargiin jigee, miilli biiftuu bilisummaa dimimmisuu malee ifee lafa hin gahin, osoo biyyi shoorarkaa wal waraansaa irraa hin tasgabbaa’in miilli isii gara ‘Oromiyaa’ imala jalqabe. Imalli isii kun hawwiifi mul’ata isiin qabaachaa turteef ragaa bahee kan dhugoomsuuf qofa osoo hin taane kan qabatamaan mirkaneessuuf akka tahe dhugaa mamii hin qabnee dha. “Abbaan koo abbaa yaada gaariifi mul’ata qabeessa dha. Nutiis mul’ata isaa yaadannoo godhannee itti fufsiisuu qabna.” dhaaddannoo jettu tan qabdu Leensaan Guddinaa, saba isii kan miidhaa hamtuu keessa jiran furmaata hatattamaatiin dhaqqabuuf dhaabbata gargaarsaa mara galeessaafi addunyaaleessa, moggaasa yaadannoo maqaa abbaa isii Guddinaa Tumsaa’ tiin bara 1992 hundeessite. Dhaabbanni Guddinaa Tumsaa (Gudina Tumsa Foundation, GTF) dhaabbata mit-mootummaa dhalaataa biyyaatiin hundaa’ee, mootummaa Xoophiyaatiin galmaa’e dhaabbata hangafa akka tahe ragaan ni mul’isa.
Dhaabbata GT kaayyoo gaariifi mul’ata dhugoomaa kan qabu yoo tahu, irra jireeysa ummata Oromoo naannoo balaa hoongeetiin yeroo baayyee miidhaman jireenya isaa fooyyeessuuf hojjata. Haaluma kanaan piroojektoota baayyee naannoo Fantaallee, Karrayyuu keessatti, dubartoota Lixa Shawaa, Sulultaafi Finfinnee irratti hojiilee bu’a qabeessa hojjachuun hawaasa biratti jaalatamummaa guddaa argatee jira. Dhaabbanni GT ittiin qajeelfama bu’ura guddinaa qindaawaa mul’ata gad fagoo Luba Guddinaa Tumsaa qaban irraatti hundaa’uun kan qajeelfamu yoo tahu, hirmaannaa hawaasaa cimsuun jireenya isaanii fooyyeessuu, manneen barnootaa ijaaruun barnoota idileefi ga’eessootaa babal’isuu, aadaa, seenaafi hogbarruu Oromoo guddisuufi kkf irratti kan hojjatuu dha. Haaluma kanaan dhaabbanni kun hundeeffama isaatii hanga ammaa hojii adda addaa hawaasa Oromootiif hojjatee jira. Hojiilee san keessaa manneen baruumsaa sad. 1ffaafi giddugalafi sad. 2ffaa ijaaruu (fknf, Matahaaratti Mana Baruumsa Daandii Guddinaa) Giddugala Oomishaafi gurgurtaa Dubartootaaf hundeessuu (Finfinnee, Gullallee), giddugala barnoota ge’eessootaa ijaaruu, manneen kitaabaa, tajaajila bishaan dhugaatii, kiliniikoota fayyaa ijaaruu, eegumsa naannoo, dhaabbata maxxansaa hundeessuu, kitaaboota aadaafi afoola oromoo maxxansuufi hojiilee biroo baayyee irratti hojjatee bu’aa daaddaa hin qabne hawaasa oromoof gumaachee jira dhaabichi kun.
Walumaagalatti dhaabbanni Guddinaa Tumsaa, dhaabboolii gargaarsa mit-mootummaa adda addaa waliin kan hojjatu yoo tahu hundeessituun dhaabbatichaa Leensaan, qaama dhimmi ilaallatu waliin hariiroo uumuun hawaasa oromoo rakkoo garagaraa qaban deeggarsa adda addaa akka argatan taasisaa turte. Dhaabbata Guddinaa Tumsaa bakka bu’uuniis Leensaan biyyoota alaa baayyeetti afeeramtee hojii dhaabichi hojjachaa jiru ibsaa turte. Kana malees hundeessituun Dhaabbata GT, aadde Leensaan mul’ata abbaa isii qofa osoo hin tahin dandeettii addaa abbaan isii qabu kan biraas kan dhaalte tahuu hojiin isii ni mirkaneessa. Abbaan Leensaa, Guddinaa Tumsaa hayyuu dandeettii hogbarruu guddaa qabu akka tahe seenaa isaarraa ni hubanna. Dandeettii hogbarruu keessaa dandeettii walaloo afaan oromoo inni qabu akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya. Walaloo Guddinaa Tumsaa barreesse keessaa mata duree “ATTAM YAA OBBO BARIISAA” jedhuun gaazexaa Bariisaa kan yeroo san afaan oromootiin maxxanfamuuf barreessee dha. Mee walalicha sarara muraasa isin yaadachiisuu hoo?
“ATTAM YAA OBBO BARIISAA”
“Baga nagaan galte yaa Obbo Bariisaa
…….” jedhee jalqabee walaloo dheertuu dubbisan hin quufamne, tan ergaan isii yoomillee nama keessaa hin dhumne faa barreessaa ture.
Leensaa Guddinaatiis dubree dandeettii walaloo barreessuu guddaa qabduu dha. Dandeettii walaloo qabdu kanatti fayyadamuun walaloo dhama qabeessaafi ergaa seena qabeessa qaban baayye barreessite. Walaloo Leensaa Guddinaa barreessiteefi Wellisaan keenya hangafni Dr. Ali Birraan ittiin wellise keessaa walaloo sirboota lamaa isaanii kan armaan gadii kana ilaallu.
Leensaa Guddinaa dubartii barnootaaf kabajaafi ilaalcha addaa qabduufi ilmaan Oromootiis akka baratan hawwii guddaa qabdu tahuu mana baruumsaa bu’uruu qofaan osoo hin taane, nama kakaasuufiis walaloon akkanatti ibsiti:
“Barnootaa barnootaa ammaas barnootaa
Kana tahuu qaba kaayyoon Oromootaa
Barnoonni dhugaa of-irraa egalaa
Aada hubachiisee seenaas ni xinxalaa
Hammilee kufte kaasaa
Ija jaame banaa sammuu bilisomlomsa”
Jechuun walaloo bara dhibbatti ergaan isii hin moofooyne sammuu keenya keessatti sumuddee, onnee keenya keessatti barreessite.
Walaloon biraa Leensaan barreessitee kan biraa walaloo ulfina, kabajaafi badhaadhina afaan oromoo qabu ibsitu, afaan ofii mul’iftuu eenyummaa ofii, calaqisaa aadaaf seenaa, bu’urri bilisummaa afaan ofii akka tahe qofa osoon taane hayyoonni waa beekaniis kan hin beekne barsiisuu akka qabuus walaloon akkanatti labsiti hayyittiin, hidda hayyuu irraa magarte.
“Galmaa aada keenyaa,
Eegaa seenaa keenyaa,
Kallacha tokkummaa, hundee bilisummaa
Afaan Oromo hundee Oromummaa…
Gurratti mi’aawaa yaa’aan sagalee kee
Cirracha bishaaniitii baayyinni jecha kee
Kan rafe dammaqsa weedduuf walaloon kee
Lakkaa’ameen dhumu hibboof maakmaaksikee” jechuun walaloo ergaa gad fagoo qabduufi akka aananiitti laphee nama qabbaneessitu nuun geessi hayyittiin oromoo, aadde Leensaa Guddinaa.
Kabajamtoota dubbiftoota keenya, Seenaan Leensaa Guddinaafi hojiilee dhaabbanni Guddinaa Tumsaa hojjatan barruu gabaabaa kanaan kan himamee xumuramuu miti. Arraaf garuu hubannoof akka tahu, kan hin beeknees akka baru jedhee barruu garagaraa irraa kaniin walitti funaane qindeessee haala kanaan isiniif dhiheessuuf yaale. Leensaa Guddina hayyittii lubbuun jirtu waan taateef dogoggorri barruu gabaabduu koo kana keessatti yoo mul’ate akka na sirreessitu kabajaan gaafadha. Kan kanarraa hafe seenaa maatii Leensaa kan akka seenaa abbaa isii Guddinaa Tumsaafi adeera isii Baaroo Tumsaa fuula dura qindeessee kaniin isiniif dhiheessu taha. Arraaf immoo hanganuma naaf guddifadhaa jechaa, Leensaa Guddinaatiis umrii isii waaqayyoo nuuf haa dheeressuu, jedhee eebbisaa dubartootaas tahee dhiirri Oromoo hojii sabaaf tahu kan akka Leensaa kana akka nuuf hojjatan gamanumaan afeeraan dhaamsa koo goolaba. Horaa bulaa!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa104SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← ABBAA BIYYAA MAANGUDDOO QABNA . Mee maali laataa? dubbisaakaa!!
GAADISA ODAA JALAA… Midhaksaa Abbishuu’tiin →